शहीदको आगमन/ पूर्ण मुनंकर्मी
हर्क बहादुरको घरमा आज धुमधामको खुसियाली छाएको छ । रातको सन्नाटालाई चिर्दै भित्र कोठामा पृथ्बीको नयाँ पाहुनाको आवाज आएको छ ।
बाहिर हर्क बहादुर हर्ष बढाइँ गरिरहेको छ । छिमेकीहरू जम्मा भएका छन् । तीन बिस कटेका देखिने बुढाबुढीहरूको ठूलै जमात छ । केहि भुराभुरि पनि हल्ला गरिरहेकाछन् । गाउँमा भएका करिब करिब सवै भेला भएका छन् -क्याप्टेन हर्क बहादुरको खुसियालीमा ।
Read more about शहीदको आगमन/ पूर्ण मुनंकर्मी
'मामु ! मामु !! ... क्लिनिकको डाक्टरले त मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो । छोरी भन्नुहुन्थ्यो, कानमा लाउने आलाले पेट, छाती जाँच्नहुन्थ्यो । जिब्रो, घाँटी पनि हेर्नुहुन्थ्यो ... यहाँको डाक्टरले मलाई किन नछामेको ? किन नबोलेको ?'
Read more about जिज्ञासा/ रवीन्द्र समीर
Read more about मौनको अग्निशमन/ महेश प्रसाईं
Read more about मृगतृष्णा
Read more about निकाह/ राशि पाण्डे
उनीहरू पिप्चाइ फेदीको सुनकोशी किनारनेर आइपुग्दा दिउँसोको करीब १२ बजेको थियो । पश्चिम उत्तरपट्टि रहेको भुङ्जु डाँडामाथिको आकाशमा बादलको सानो थेग्लो स्थिर भएर बसेको देखिन्थ्यो । यही ठाउँबाट उनीहरू सुनकोशीको गड्तिर छाडेर उकालो चढ्छन् । दशैं तिहारको मुखमा यो बाटोमा ढाकर बोक्नेहरूको ताँती जुलुस हिँडेजस्तै देखिन्छ । हिउँदका अरू महिनाहरू पनि यो बाटोमा ढाक्रेहरूको बाक्लै लाम भेटिन्छ । वर्षा लागेपछि यो बाटोमा मान्छेहरूको चाप स्वाट्टै घट्छ । बाटो हिँड्ने मान्छेहरू घटेपछि कोशी किनारका गाउँहरू स्वरूङ दोभान, निवुवाटार र कुनाइका मान्छेहरूको आयस्रोत पनि घट्छ । यही बाटोका कारण यी गाउँहरू
Read more about सन्त्रस्त आँखाहरू
उसले त्यसदिन घाँसको भारी बोकेर आँगनमा टेक्दा पश्चिम दिशामा सूर्यको ओरालो झरेको रातो टाटोले पाथीभरा लेकको थुम्को छुन खोज्दैथियो । ऊ अघिअघि घर आएकी थिई, गाईबस्तुलाई पछाडि छाडेर । घाँसको भारी आँगनको डिलमा बिसाउन खोजी तर ठाउँ पाइन । डिलमा गोदाबरी र मखमली फूलका बोटहरूले कोपिला हालिरहेका थिए । एक मनले सोची – फूलका बोटहरू भाँचिए पनि भाँचिऊन्, भारी डिलतिर बिसाउँदा सजिलो हुन्छ । फेरि अर्को मनले सोची – त्यतिका मेहनत गरेर हुर्काएका फूलहरू कसरी बिगार्ने ?
Read more about एउटा नयाँ यात्रा
Read more about भ्रम/ राप्रउ पोखरेल
Read more about सुहागरातको समाप्ति/ विमलेन्द्र मिश्र